Ceelgows Xogta Warqad Furan: Tolo Ku Socota Madaxwayne Xasan ShiikhLast update 13-09-12
Tolo Ku Socota Madaxwayne Xasan Shiikh<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Waxaan ku bilaabayaa magac Allah ee naxariis oo dhan iska leh
Awalan waxaan Allah swtc kaaga baryayaa xilka ku saaran inuu kuu sahlo sidaad u godan lahayd.
Xasanoow waxaad ogaataa qof kursigaa ku fariistay oo aan sumcad iyo sharaf doonayn ma jirin, haddii ay xaajo ka fishalanto oo bulshadii uu madaxda u noqday ku kacdo iyo haddii uu guulaystaba oo bulshadii daba kacdo. Waxaa marka is waydiin mudan haddii ruux kastaa sumcad sharaf iyo wanaag doonayo maxaa ku keena fashilan iyo sumcad xumo inay ku dhacdo.
Xasanoow ruux markuu kursigaa sare helo waxaa sare u qaada sumcaddiisa iyo sharaftiisa ama hoos udhigaa waa hadba dadka ku xeeran oo ruuxaasi soo dhowaysto, haddii dadkaasi noqdaan dad daacad ah oo hawshaas hortaagan u fuliya sidii loogu talagalay Allah swtc guul iyo sharaf aan ka dhammaan ayuu siiyaa haddayse noqdaan dadka uu soo dhawaystay Danaystayaal iyo Damdamlayaal magac xumo iyo fashilan ayaa ku timaadda ruuxaas kursiga sare ku fadhiya.
Xasanoow waxaad ogaataa Somalidii hore markay bulsho rabaan inay u taliyaan waxay guran jireen wax garadka iyagoon u eegayn da�diisa iyo maalka uu leeyahay arintaasina waxay u horseedi jirtay inay talo isku raacaan oo ay bulshadaas ku furaan meel doog iyo ramaas leh xareeduna balliyadu buuxaan.
Xasanoow waa yadaan danbe arintaas waxaa bedeshay ruux jaamacada ka soo baxay inoo xula meeshii ahayd wax garad inoo xula. Qof wax bartay oo is bedelka adduunka la socda waa muhiim laakiin waxaad ogaataa inaan hooyo ilmaheeda oran adigu doqon baad tahay, adigu macangag aan geri gelin baad tahay iyo adigu sidaan baad tahay ee ay ciyaalkeeda dhammaan wada gayso iskuulka oo ilaa heer jaamacadeed soo wada maraan ay dabada ka wado. Taasna waxaad ku garan kartaa in ruux kastaa uu wax baran karo laakiin garashada iyo sama ka talintu tahay deeq ilaah bixiyo oo aan qofna la bari karin. Marka waxaa loo baahan yahay dadkii wax bartay in laga xusho wax garadka ee aan shahaado bes lagu xulan ee la eego garaadkiisa qofnimo.
Xasanoow waxaan uga golleeyahay hadaad rabtid inaad meel fiican gaarto oo bulshadaas dhibtu ku habsatay ka samata bixiso xulo dadka waxgaradka ah oo aqoonta leh oo isbedelka adduunka maanta la jaan qaadi kara dadkana u hogaamin kara meel doog iyo ramaas leh xareeduna balliyada buuxdo haddii Allah idmo.
Xasanoow laga soo bilaabo qarniyo hore dawladaha adduunka ku nool waxaa galay damac ah waddan kasta inay ku danaystaan ama xoog ha u qabsadeen oo dantooda haku fushadeen ama xeelad khayaamo ku dhisan ha u adeegsadeen. Ruuxii aan garan karin oo aan xeeladahooda kula legdamin waxaa ku imanaysa inuu u hongaansamo oo ay dulleeyaan isaga iyo dawladdiisa iyo bulshadiisaba hadduu diidana si sahal ah oo fudud ayeey uga takhalusayaan iyagoo ama bulshadiisii ka horkeenaya ama xoog ku muquuniya iyagoo u adeegsanaya sharciyo ay samaysteen intooda isku awoodda ah. Xasanoow in mudda ah ayaa Somalida nidaamkii ay lahayd la isku dayey in la baabi�iyo nidaamkaas oo ku dhisnaa ixtiraam is qadarin isu turid kala danbayn iyo wax wada cun taasoo u keentay inay wanaag iyo sharaf ku wada noolaadaan. Waxaadna ogaataa in bulshadii taariikhdeedu ka dhuntaa in murug maarug u danbeeyso, waana sida maanta haysata bulshadii sumcadda iyo sharafta lahayd ee Somaliya. Waxaana ka danbeeyey arintaas nidaamyadii uu gumaystuhu inoola yimi oo isku dir oo qaybi oo xukun ku salaysnaa oo cadaawad xun dhex dhigay qabiiladii Somaliyeed oo wanaagga ku wada noolaan jiray.
Xasanoow gumaystihii ka dib waxay inooga tageen nidaamyadii ay lahaayeen ee ku salaysnaa dabqado iyo kala sarayn waa nidaamka ay ugu yeeraan dimuqoraadiga bulshadeenuna hiddo iyo dhaqan uma leh kala sarayn iyo daabaqado. Waxaa inoo xigay nidaamkaas kii ku salaysnaa caburinta iyo kaligay ayaa talin kara ee hantiwadaagga bulshadeenuna waxay dhaqan u lahayeen wada tashi iyo maxaa inoo fiican.
Xasanoow bulshadaas sidii wanaageedii iyo sharafteedu loogu soo celin lahaa oo looga dhaqi lahaa xumaatada ay ku beereen nidaamyadaas kala duwan ee soo maray waa howl aad u adag oo dulqaad iyo is tix gelin dheeraad ah u baahan waxaadna ogaataa inaysan jirin arin aan furo lahayn waxkastaa meel laga galay leeyihiin qofkii furahaas helaa wanaag ayaa Allah swtc u danbaysiiyaa isaga iyo bulshadii uu garwadeenka u noqday. Xasanoow waxaan ku leeyahay oo kugula talinayaa raadi furahaas waa jiraa oo anigu shaqsi ahaan waxaan soo milicsaday muddo dhowr sana ah oo aan joogay Somaliya oo aan baadiye tuulooyin iyo magaalooyin badan tegey una kuur galay hab u dhaqankooda iyo waxa maskaxdooda ka guuxaya oo ay rabaan.
Xasanoow waxaan kaloo ku oran lahaa markii meel nuurku ka dansanaa ay duul uyimaadaan oo fanuus u shidaan markaad timaado waxaa gacanta la qabsadaa duulkii faynuuska u shiday oo doonayey inay nal if wayn siday bulshadaas ugu keeni lahaayeen u guntanaa. Waxaadna ogaataa faynuuska ay shideen duulkaasi inaysan u baahnayn raad raadin ee Adiga iyo Baarlamaanka maanta jiraa tahay caddayntu. Umana baahna runtii maskax dheeraad ah maanta ruuxii raysal wasaare u qalma waana hebel ku oran maayo sababtoo ah jagada maanta aad joogto u malayn maayo inaad garasho xumo ku tagtay ee waxaa ku geeyey oo lagugu doortay waa garasho dheeraad ah oo lagugu arkay sidaan qiyaasayo.
Xasanoow hadaadse talo u baahato ku salaysan wax ka qabashada iyo soo celintii wanaaggii iyo sumcaddii ay bulshada Somaliyeed lahayd wax alla waxaan kaala qaban karo insha Allah waan kugu caawin anigoon waxba doonayn aan ka ahayn inaan mar ka dhex arko Waddamada aduunka Astaantayadii oo aan cidi yasayn. Wa Billaahi Tawfiiq
Qore Eng: Abdirashid Abdi Daad
Guurey@hotmail.com Xasan Culusow oo daboolka ka qaaday in Jubaland aysan Cadaalad ka jirin balse Mogadishu ay cadaalad taalo?�Ururka Sahal oo bayaan adag kasoo saaray cadaalad xumada iyo farogelinta qaawan ee Xasan Sh.Xasan Qoslaaye oo dagaal ku baaqay!Mudanayasha Barlamanka ee Mooshinka wada oo Shir Jaraa�id qabtay Jubbaland waa guul u soo hoyatay ummadda iyo dalka SomaliaHees aan caadi aheyn: Heestii ka joog yee ku jiirine Jubaland by Nuur AhmedMuqdisho Ma baarlamaan Somaliyeed baa mise waa xabsi?Daawo: Dood kullul oo ku saaban arimaha Jubooyinka DF oo biloowday inay ugaarsato xildhibaanada wada mooshinka ka horjreeda R/W Saacid Breaking News: Xubnihii IGAD Iyo Ergada Kismaayo oo is-afgartey.‏